Global Voices teny Malagasy » Tatitry ny Vondrom-Piarahamonina Momba ny Vovonan’ny Fahazoan’ny Tompotany Miserasera · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 06 Marsa 2018 14:38 GMT 1	 · Mpanoratra Rising Voices Nandika Naomy
Sokajy: Fidirana, Mediam-bahoaka
Afisin'ny Fihaonambe Fifandraisana Amin'ny Aterineto. Nampiasaina avy amin'ny lisansa CC-BY-SA.
Ny lahatsoratra manaraka etoana dia ny Fehin-kevitra Tanterahan'ny vondrom-piarahamonina Internet Society momba ny Vovonan'ny Fahafahan'ny Tompotany Miserasera notanterahana vao haingana. Miangavy anao hitsidika ny tranonkalan'ny Internet Society raha te-hamaky ny tatitra feno  azonao trohina. Navoaka indray araka ny lisansa CC-BY-SA ny fehin-kevitra.
Ny Vovonan'ny Fahafahan'ny Tompotany Miserasera  notanterahana tamin'ny faha-8 sy ny 9 Novambra, tao amin'ny Hotel Santa Fe tao Santa Fe, New Mexico, no fihaonana voalohany notanterahan'ny Internet Society  mifantoka amin'ny fidiran'ny vondrom-piarahamonina tompotany (vazimba teratany) amerikana tavaratra amin'ny aterineto. Nahangona mpandray anjara tonga mivantana sy an-tserasera mihoatra ny 200 izany nandritra ny roa andro nifandimbiasan'ny antsafa eny an-tsehatra, fanolorana ary adihevitra misokatra mandalina ireo tambajotram-piarahamonina ao Amerika Avaratra sy aty ivelany, ary tafiditra amin'izany ny fiantraikany amin'ny vondrom-piarahamonina isan-karazany. Ny Vovonana dia nialohavana fotoam-panazarana maharitra roa andro ho an'ireo vahoaka tompotany izay mamelona tambajotram-piarahamonina sy eo andalam-pananganana izany amin'izao fotoana izao.
Niteraka fifampiresahana iankinan'ny ain-dehibe momba ny dikan'ny fahafahan'ny vondrom-piarahamonina miserasera ny lanonana sy ny fomba iantohana fahazoa-miditra aterineto taka-bidy, tsara kalitao ary maharitra ho an'ny vondrom-piarahamonina Teratany Alaska, Indiana Amerikana, Inuit, Firenena Voalohany ary Metisy. Nasongadin'ireo mpandray fitenenana sy mpandray anjara fijoroana vavolombelona ny fifandraisana iankinan'ny ain-dehibe ao amin'ny fahafaha-miserasera sy ny tombontsoa ara-piaraha-monina sy ara-toe-karena azo avy aminy, tahaka ny fahafaha-manapa-kevitra ho amin'ny hoaviny sy ny fizakantena, ny kolontsaina ary ny fikolokoloana ny fiteny, fivoarana ara-toekarena, fahasalamana, fanabeazana sy asa. Nisy ny marimaritra iraisana ankapobeny fa lalambe idealy manatanjaka ny vondrompiarahamonina tompotany sy mitarika mankany amin'ny vahaolany manokana ara-piseraserana ny tambajotram-piarahamonina ara-piseraserana
Nahazoana fanafatrafarana lehibe ho fampiroboroboana ny fahafaha-miserasera maharitra any amin'ny vondrom-piarahamonina tompotany saro-dalana sady ambanivohitra ny lanonana. Tafiditra ao anatin'izany ny filàna:
1. Vahaolam-piseraserana vaovao mifantoka amin'ny faharetana.
2. Tontolo misokatra amin'ny politikam-panohanana, fananganana fanararaotra sy fanabeazam-panjakana.
3. Fahafaha-manangana sy fanabeazana ao anatin'ny vondrom-piarahamonina.
4. Fanamorana ny fahazoa-miditra amin-javatra maro ho an'ny vondrom-piarahamonina tompotany.
5. Vahaolam-pifanohanana mifototra amin'ny teknolojia mahasehatra ny hoavy.
6. Fikarohana manerana an'i Amerika Avaratra momba ny fahafahan'ny tompotany miserasera.
Ny lahatsarin'ny fanolorana sy ny fifanakalozan-kevitra dia hita ato  amin'ny fantsona mivantan'ny Internet Society ato .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/03/06/115982/
 tatitra feno: https://cdn.prod.internetsociety.org/wp-content/uploads/2018/01/2018-01-04_ICS-Report-final.pdf
 Vovonan'ny Fahafahan'ny Tompotany Miserasera: https://www.internetsociety.org/events/indigenous-connectivity-summit/
 Internet Society: https://www.internetsociety.org